Muuqaal duubihii Daacish oo xabsi dheer lagu xukumay | KEYDMEDIA ONLINE
Muuqaal duubihii Daacish oo xabsi dheer lagu xukumay
Qareennadii u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in loo naxariisto mar hadii uu qaabilsanaa kaliya muuqaal duubista.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sannadkii 2020 ayaa loo xiray Cabdisamad Ibraahi Cumar oo magiciisu afgarashu yahay Abuu Cali kamid ahaanshiyaha Daacish tan iyo sannadkii 2016.
Magaalada Gaarisa ee dalka Kenya ayuu ku dhashay Cabdisamad, isaga oo joogo Nairobi ayuu go’aansaday in uu ku biiro Daacish.
Boosaaso ayuu kaga sii gudbay buuraha Gal-gala, wuxuuna tababbarkiisii ugu horreeyay ku qaatay Camaaro, isaga oo ka qeyb noqday koox jabhad ah oo khalalaaso ka sameysa dhulka bari ee Puntland.
Daacish ayaa go’aansatay in lagu daro qaybta warbaahinta oo loo diyaariyay in uu noqdo Muuqaal Duube.
Hay’adaha barista ayuu u sheegay in uu ahaa muuqaal duubihii dagaal ku dhex maray Daacish iyo Al-shabaab Muraale December, 2018 iyo sidoo kale Baar-Gaalle oo isna dhacay March, 2019, dagaalladaasi oo tirada la wariyay ee dhimasha iyo dhaawac ee kala gaaray labada koox lagu qiyaasay in ka badan 30-dagaalamayaal ah.
Kaddib baaritaan dheer oo ay ku sameeyeen eedeysanaha hay’adaha dambi barista, 28 June ee sannadkan ayay ku soo wareejiyeen xafiiska Xeer Ilaalinta si’uu u mariyo habraaca dacwadda lagu soo oogay.
In gar-suge ahaan loogu hayo xabsiga dhexe ayuu xafiiska xilligaasi ka codsaday garsoorka Ciidamada, bartamihii bishii July ayaa loo ballamay fadhigii ugu horreeyay eedda ka dhanka ah Cabdisamad Ibraahim Cumar.
Xafiiska xeer Ilaalinta ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo ciqaab adag maadaama Daacish ay u soo wakiilatay Qal-qal gelinta Amniga Muqdisho balse ay Ciidamada Amniga qabteen isaga oo ka soo degayo Garoonka Aadan-Cadde.
Maanta ayay Maxkamadda go’aan ka soo saartay kaddib fadhiyo kala duwan oo ay ka yeelatay, waxaana lagu xukumay Cabdisamad Ibraahim Cumar 10 sanno oo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay dhinacyada Dacwadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee ciidamada Qalabka Sida. Basle xukunsanaha ayaa haysta Fursad uu ku dalban karo Rafcaan 30 cisho gudaheed.